Otu esi eme waya
Waya ịbịaru Onodi
Malite na nnukwu mkpanaka igwe (Q195, 6.5mm), mgbe ahụ, a na-adọta mkpanaka a site na efere ígwè nwere oghere na ya. A na-akpọ efere ígwè a ịnwụ, a na-akpọ usoro nke ịdọpụta ọla site na ọnwụ. A na-emegharị usoro a ugboro ugboro na obere obere na-anwụ anwụ ruo mgbe iru ogo waya achọrọ ruru.
Otu esi eme ka eriri kpoo
Na-eme waya achọrọ achọ site na ịsa ahụ nke zinc wụrụ awụ. Anyị emeela gas ka ọ bụrụ ihe nnọchi kemgbe 2014, nke na-eme ka gburugburu anyị dị ọcha karịa nke mbụ. Ọnụego zinc nwere ike ijikwa igwe, yabụ ị ga - enweta zinc ọ bụla ịchọrọ.
Etu esi kpoo waya ntaneti / ntupu
N'ihi na ọkụkọ waya / hexagonal waya, kpaliri waya ga-kpara akpa ọnụ na-eme hexagonal oghere.
N'ihi na ịgbado ọkụ waya ntupu, waya ga-ịgbado ọkụ ọnụ na-eme ka square oghere.
Site na nnukwu mpịakọta na obere mpịakọta
Iji chekwaa ohere, ngwaahịa emechara ga-emechi ọnya site na igwe pụrụ iche, na-ekwe ka ọtụtụ mpịakọta dabara na pallet. Njupụta dị elu kwa cubic na-enyere ọtụtụ iberibe ka a ga-ebuba n'ime akpa, na-ebelata ọnụ ahịa mbupu kwa otu.
Ndị ọrụ ga-abịa akwa mkpuchi mmachi.
Osisi pallet / pallet / igbe katọn / igbe osisi buru ibu…
Netting / ntupu ịkpa ákwà, Rolling na mbukota
Anyị na-anabata ọtụtụ ụdị ọkụkọ ọkụkọ, welded na woven mesh specification in Galvanized Before Weaving / Weld (GBW), Galvanized After Weaving / Weld (GAW), PVC Coated and Stainless Steel. Dị iche iche Ogige ntupu, Aviary netting na ntupu, Dog ngere nwekwara ike ọnọ.
Anyị na-edebe ọtụtụ ngwakọ ma anyị nwere ike ịtụ ihe ndị pụrụ iche site na igwe igwe. Site n'ịnọgide na ụkpụrụ nke "Ọkacha mma, nnyefe ọsọ ọsọ, Ọrụ ọsọ ọsọ", anyị enwetala aha ọma na mba ofesi, gụnyere Europe, America, Southeast Asia, Mid-east, North American, wdg.
Anyị na-agba ume iji tụnyere nke ngwaahịa mma na price. The emeputa nke materail bụ ọkachamara soplaya na ha nwere ike nlezianya quality.We bụ n'ezie mpako nke zụrụ azụ mkpara ndị juru n'ọnụ na ahuhu, na-abara uru ngwongwo na anyị nso ọrụ.